Izitayile eziqhelekileyo ezineejee kunye nezikipa ukutyelela isixeko | IBezzia
UMaria vazquez | 03/05/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Ijeans ziqabane elihle xa yenza iimpahla eziqhelekileyo imalunga. Phantse sonke sinesibini ijean kwimpahla yethu, kwaye phakathi kwezi kuhlala kukho isibini esibheja kuso xa sifuna intuthuzelo ephezulu.
Kunye nezo ijini ekwenza uzive ukhululekile, Kuwo onke amanqanaba, unokuphinda wenze naziphi na izimbo esizicebisayo namhlanje. Izitayile ezifanelekileyo zezo ntsuku xa simka ekhaya ngaphandle kwezicwangciso okanye xa sisazi ukuba kuya kufuneka sihambe indawo enkulu esixekweni.
Kwaye ukuba sithetha ngezicwangciso eziphuculweyo kunye nokuhamba okude, akukho zixhobo ziya kusinika intuthuzelo enkulu kunabambalwa I-T-shirts okanye izihlangu zemidlalo. Ngoku ukuba sele sinesiqingatha sesitayile sethu esilungisiweyo. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha iincopho ezifanelekileyo.
Ngentwasahlobo a ihempe okanye isikipa esisisiseko baba lukhetho olukhulu. Ihempe emhlophe sisiseko esinokuthi sizibandakanye kokubini kwizambatho ezinje ngezi sizenzayo namhlanje kunye nezinye ezisesikweni. Ukuba ubheja kwihempe, yenzele enye emhlophe okanye emnyama ukwenza iimpahla ezilula ongadinwayo.
Ngezo ntsasa zipholileyo okanye ubusuku, khetha u iblazer okanye ibhatyi emfutshane ukukunceda ukuba ulwe nengqele. Ukuba ufuna iimpahla ezisisiseko ukwenza inkangeleko elula, yenza umahluko wemibala phakathi kwebhatyi kunye nehempe ukongeza umdla kuyo.
Libala ngezambatho ezisisiseko ukuba ufuna ukutsala umdla kwinto ethile enxibayo. Umphezulu oprintiweyo okanye oneenkcukacha ezihamba ngathi iikhola ezinkulu okanye imikhono emikhulu iyakwenza amehlo onke ajonge kule.
Ngaba uhlala uhlala ubuyela kwindibaniselwano yeejean kunye neempahla zaselwandle ukwenza iimpahla eziqhelekileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Izitayile eziqhelekileyo ezineejee kunye nezikipa ukutyelela isixeko